> Resource> Free> Top 5 Free Data Recovery Mmemme
Faịlụ nwere ike furu efu site na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ n'ihi na dị iche iche ndapụta, dị ka nhichapụ, formatting, virus agha ma ọ bụ usoro njehie. Ozugbo faịlụ na-efu, e nwere 3 ngwọta n'ihi na ị na weghachite ha:
Naghachi furu efu faịlụ site na preview ndabere ma ọ bụrụ na ị nwere;
Naghachi ehichapụ data si egweri biini (Windows PC) ma ọ bụ Mkpofu (Mac) ọ bụrụ na ha adịghị e kpam kpam bupụrụ;
Get data mgbake software.
Na ahụmahụ anyị, akpa abụọ ngwọta-adịghị dị ka bara uru ka anyị na-atụ anya na ọtụtụ oge. Nọmalị, anyị na ike ịhụ a data mgbake omume maka enyemaka. Ma ebe ọ bụ data mgbake omume na internet bụ otú mgbagwoju anya na ọ bụ mgbe ike ka anyị na-họrọ kasị bara uru na a pụrụ ịdabere otu. Gịnị bụ ọbụna njọ, ọtụtụ n'ime data mgbake omume na-akwụ ụgwọ software. The free ma ọ bụ ikpe nsụgharị nke ha naanị na-enye gị mmachi mgbake ọrụ. Nke a bụ n'ezie nhụsianya.
Bụ n'ebe a data mgbake omume na dị ike ma free? Ndepụta nke free data mgbake omume kwesịrị ekwesị nke bụ kwadebere ebe a. Anyị ẹmende 5 ike data mgbake freeware n'ihi na ị na ịhọrọ site ke ibuotikọ emi.
Top 3: Pandora Iweghachite
Top 2: Amamihe Data Recovery
Top 1: Puran File Iweghachite
Recuva bụ a ma ama free data mgbake omume pụrụ iche e mere maka Windows. Ị nwere ike iji ya Ọkachamara mode ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka mode iji weghachi furu efu data site na ngwaọrụ gị.
The Ọkachamara mode ka ị hazie search ụdị iji "All Files", "Foto dị", "Music", "Documents", "Video", "abịakọrọ" ma ọ bụ "ozi ịntanetị". Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịtọ search ọnọdụ ka n'ebe nile na kọmputa gị.
1 Ike ọkachamara mode na zuru ezu ndu;
2 zuru ezu-ekwu, nke hụrụ faịlụ a ga-emere na window: recoverable ma ọ bụ unrecoverable;
3 E nwere otu kemfe version n'ihi na ị na wụnye ya na a USB mbanye ma ọ bụ ihe mpụga ike mbanye;
4 Ọ bụ kpam kpam free, na e nweghị ọtọ dị iche n'etiti free version na akwụ ụgwọ pro version;
4 All Windows OS akwado: Windows 8, Windows, Windows 2008 Server, Windows Vista, Windows XP, Windows 2003 Server.
1 Ọ bụghị ihe niile mbụ faịlụ aha dị. Ị pụrụ nanị ele ụfọdụ nke mbụ hụrụ faịlụ aha;
2 Files na-adịghị ota na ụdị faịlụ na ntuziaka mode;
3 Ị pụrụ nanị ịhụchalụ ụfọdụ foto.
Undelete 360 ​​bụ onye ọrụ-enyi na enyi na bara uru ịba uru na suut maka niile nsụgharị nke Windows na Windows faịlụ usoro. Ọ irè naputa faịlụ furu efu ruru ọtụtụ ihe mere ka kpachaara anya ma ọ bụ n'amaghị ama nhichapụ, software ma ọ bụ ngwaike ọdịda, Trojan ọrịa, ma ọ bụ ọbụna na-atụghị anya usoro shutdown. Ị nwere ike idozi hụrụ faịlụ site na "Ụdị" ma ọ bụ "nchekwa". I nwere ike ịgwa otú mebiri emebi na faịlụ a bụ dị ka "Ọnọdụ" kọlụm na window.
E nwere ugwo ọkachamara version nke usoro ihe omume. Ị nwere ike iji "iyo" nhọrọ, nakwa dị ka ụdị faịlụ na "nchekwa" Atiya, na free version bụ ka a pụrụ ịdabere na ike data mgbake ngwá ọrụ gị iweghachi gị furu efu data.
1 N'ụzọ na-eju ngwa ngwa scanning ọsọ
2 Doro Anya-ekwu, nke hụrụ faịlụ na-egosipụta. Niile hụrụ faịlụ ga-chọpụtara na-acha uhie uhie "overwritten" na green 'Nnọọ Mma "ọnọdụ.
1 ọtụtụ ọrụ na window bụ adịghị, dị ka "Hichapụ Files", "Group Site nchekwa" na "File Preview". Mkpa ka ị nweta nkwalite ka ọkachamara version iji rụọ ọrụ ha.
2 Ọ bụghị ihe niile faịlụ na-depụtara na mbụ aha. Mgbe ụfọdụ, ọ ga-esi ike ka i nweta ihe ị chọrọ n'ezie ka weghachite.
Pandora Iweghachite bụ a free data mgbake software na Recovers furu efu faịlụ site na NTFS na abụba-formatted mpịakọta. Na ya, i nwere ike naghachi foto, vidiyo, ọdịyo faịlụ ma ọ bụ akwụkwọ.
Gịnị na-eme ya otú pụrụ iche bụ na ị na ike ịchọgharị na hierarchy nke dị na-ehichapụ faịlụ, ma ọ bụ i nwere ike iji search arụmọrụ iji chọta a ehichapụ faịlụ ma ọ bụrụ na ị na-echeta faịlụ aha, faịlụ size, faịlụ e kere eke ụbọchị, ma ọ bụ faịlụ ikpeazụ enweta ụbọchị mgbe scanning. Ịnwere ike ihuchalu ma image faịlụ na ụdị na ederede faịlụ na ụdị tupu agbake ha.
1 Enyele dị iche iche scanning nhọrọ: "ịchọgharị Doppler" na "Elu Doppler";
2 Ọkachamara na ọnọdụ na zuru ezu ntuziaka dị;
3 Recovers Archived, zoro ezo, ezoro ezo, abịakọrọ faịlụ
4 Quick onyenlereanya-enye gị ohere ịhụchalụ image faịlụ na ụdị na ederede faịlụ na ụdị;
1 Files na-adịghị ota na ụdị faịlụ. Mkpa ka ị na-eji "Chọọ" ọrụ ugboro ugboro iji nweta ihe ị chọrọ;
2 The ịba uru adịghị akwado niile faịlụ na ụdị;
3 The interface bụghị nnọọ doro anya na o nwere ike ịbụ ntakịrị esiri newbie iji ya.
Get Pandora Iweghachite
Maara ihe Data Recovery bụ obere na ngwa ngwa free data mgbake omume na-agba ọsọ na Windows PC. The n'ezie ọcha interface nke ịba uru-enyere gị aka naghachi ehichapụ foto, videos ọ bụ ọdịyo faịlụ n'ime ọtụtụ mfe clicks. Usoro ihe omume dị ọcha menu-eme ka ọ kama mfe ịhụ na họrọ kpọmkwem faịlụ na ị chọrọ iji naghachi.
1 Nke a bụ obere ịba uru na mfe na-eji interface na ngwa ngwa scanning ọsọ;
2 The recoverability nke hụrụ faịlụ a ga-n'ụzọ doro anya egosipụta na "Good", "Ogbenye", "nnọọ ogbenye", ma ọ bụ "Lost" ọnọdụ;
3 ikpeazụ gbanwetụrụ oge nke furu efu data ga-egosipụta na mmemme window.
1 Ị ga-enwe ike ihuchalu hụrụ faịlụ;
2 Hụrụ data elistiri na anụ ahụ ndekọ ndị ọzọ karịa na "nchekwa" ma ọ bụ "File Pịnye" edemede.
Get Amamihe Data Recovery
Puran File Iweghachite bụ a ịba uru-enyere gị aka iji weghachite ọrụ dị mkpa akwụkwọ, foto, videos ma ọ bụ music si ma Obodo mbanye na kọmputa gị ma ọ bụ mpụga nchekwa ngwaọrụ. Ọ na-enye gị na 3 scanning ụzọ: Quick iṅomi, miri iṅomi ma Full iṅomi. Mgbe scanning, ị nwere ike idozi faịlụ na ụdị faịlụ ndị dị ka "Pictures", "Music", "Documents", wdg Ị ga-enwe ike iji zọpụta natara faịlụ na ụzọ ha Ọdịdị emebibeghị. Na niile, Puran Njikwa Iweghachite doro anya interface-enyere gị aka naghachi niile furu efu data na ala.
1 3 ike scanning atụmatụ ndị dị na: Ndenye iṅomi, miri iṅomi ma Full iṅomi;
2 Ị nwere ike hazie scanning dị ka gị chọrọ;
3 Easy search igbe-enyere gị aka ịhụ ihe ị mkpa ngwa ngwa.
1 Hụrụ faịlụ na-adịghị ota na "nchekwa". Ị pụrụ nanị ele ha "File Pịnye"
Get Puran File Iweghachite
All free data mgbake omume na nke a na ndepụta bụ pụrụ ịtụkwasị obi, ha na mma zuru oke maka nkịtị data mgbake chọrọ. Ugbu a na i nwere ọtụtụ free data mgbake omume na nhọrọ, ọ bụ oge gị na iji họrọ kacha adabara iweghachi gị ehichapụ faịlụ ugbu a!
Wondershare Data Recovery: Ọzọ Ebube Nhọrọ maka Ị
Ọ bụrụ na free utilities na ndepụta a adịghị aka gị ma ọ bụ ị na-eme 'nwere Mac, ị nwekwara ike na-Wondershare Data Recovery dị ka a na-agbalị.
Nke a na usoro naputa niile furu efu faịlụ site na kọmputa gị ma ọ bụ nchekwa media gụnyere kaadị ebe nchekwa, mpụga ike mbanye, kaadị ebe nchekwa, USB mbanye na na. The enwekwukwa mgbake technology nke usoro ihe omume-egosi na ị 3 ike mgbake ụdịdị, nke ị nwere ike ghara inwe si free mmemme:
Echefuola File Iweghachite - Naghachi Ị na-ehichapụ faịlụ na mbụ ha faịlụ aha na ụzọ.
Nkebi Iweghachite - weghachite rụrụ arụ ọ bụ furu efu partitions, na ihe nile data emebibeghị.
Raw Iweghachite - Deep iṅomi gị na ngwaọrụ ma gbapụta data ọbụna mgbe faịlụ usoro na-emerụ.
Usoro ihe omume na-enye gị a free version, nke-enye gị ohere iṅomi gị Windows PC ma ọ bụ Mac maka furu efu faịlụ ọ na-eri. Ọ bụrụ na gị furu efu faịlụ na-hụrụ na recoverable, ị nwere ike ịzụta zuru version ($ 39.95) naghachi ha.
Top 5 Free MOD Ntụgharị